Wadaagista Guuldarooyinka (iyo Guusha?) | Martech Zone
Wadaagista Guuldarooyinka (iyo Guusha?)
Axad, Nofeembar, 9, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Koofiyad Koofiyad Musing-ka McGee halkaan ka helay video-ga guuldarada. Waad ku mahadsan tahay dhiirigelinta qoraalkan!
Marar dhif ah ayaan la kulmaa qof guuleysta oo aan gadaashiisa wax guuldarooyin musiibo ah qabin. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan bartay sida loo qiyaaso guusheyda si ka duwan sida ugu badan. Waan ku guuleystey maxaa yeelay waxaan heystaa 2 caruur ah oo fantastik ah oo aan si aad ah ugu faraxsanahay isla markaana durbaba muujinaya karti aan ka fiicneyn wixii aan ku gaadhay da 'ahaan da' ahaan.
Markaan dib u milicsado noloshayda, in kastoo, waxaan aaminsanahay in guushaydu ku timid guul darradayda awgeed - in kasta oo ay tahay. Waxaan haystaa taariikh qurux badan oo midab leh isla markaana waxaan qaatay go'aano badan oo xun, laakiin ilaa 5 sano ka hor ayay ahayd markii aan joojiyay xoog saarista iyo isku dayga inaan ku horumariyo waxa aan ahaa xun at oo bilaabay inaan ogaado waxa aan ahaa weyn at. Waxaan bilaabay inaan isku hareereeyo dadyowgii igu xukumay oo iga caawiyay hagaajinta xirfadahayga halkii aan ku dhaleeceyn lahaa daciifnimadayda.
Markii aan toosay, waxaan ahaa wareejiyay oo ka soo baxay dugsi sare, darajadiisu salka ku haysay Ciidanka Badda Mareykanka, ayaa furiin, wuxuu bilaabay dhowr shirkadood, guri lumiyay iyo caruurtaydii (laba jeer) ayuu dib u raray Dhinaca kale, waxaan qabtay darajooyin heer-sharaf ah oo kuleejka ah, waxaan ahaa mid qurxin iyo maamuus leh laga soo daayay Gulf War Vet, wuxuu mas'uul ka ahaa kobcinta meherado badan oo guuleysta, waxaan gacan ku lahaa iibinta shirkad caalami ah, waxaanan lahaa guri aamin ah oo hal qof ah aabe leh 2 caruur ah oo daacad ah oo dadaal badan.
Haatan waxaan nasiib u yeeshay inaan ka caawiyo socodsiinta shirkad sii kordheysa oo aan ka caawiyay dhisida qorshayaashii ganacsi ee asalka ahaa. Wali ma ihi taajir, mana daneeyo inaan sidan ahaado. Qoyskaygu wali waxay ku nool yihiin guri dabaq ah. Lacag kasta oo aan kaga tago mushahar kasta waxay u dhacdaa waxbarashadda wiilkayga ama dib ayaa loogu maalgeliyaa hawlo cusub. Ilaa iyo inta aan haysto qoys farxad leh iyo saqaf madaxayga ah, waxaan ahay hal nin oo faraxsan!
Haddii aad i weydiin laheyd dhacdooyinka kaliya ee ugu weyn ee nolosheyda badalay, waxaan heystaa labo:
Furniinkayga. Waxaan ahaa aabe jecel laakiin waligey ma tusin ilaa aan wajaho suurtagalnimada in caruurteyda la waayo. Furniinkaygu wuxuu noloshayda oo dhan galiyay aragti.
Iscasilaada shirkad. Ka dib markii aan dhisey dakhliyada shirkad maxalli ah oo ka baxsan shaxanka, waxaa la i geeyey maamul cusub oo u maleeyey inaan hanjabaad ahay oo albaabka laga soo saaray. Waxaan imid guriga, waxaan ku fadhiistay sariirta, waxaanan wacay saaxiibkay Darren Gray iyo Pat Coyle.
Pat ayaa isla markiiba shaqadii i galiyay oo dib uma eegin. Waxaan sidoo kale bedelay aragtidayda ku saabsan naftayda iyo qiimahayga ganacsi. Marnaba ma aan ahayn shaqaale mar labaad, oo aan sii wado la shaqaynta iyo shirkadaha noloshayda ku naaxin lahaa inta aan ka shaqaynayey si aan u xoojiyo kooda.
Waxaan kula talinayaa qofkasta oo dhalinyaro ah in sida ugu dhakhsaha badan ee aad u ogaato waxa aad ku fiicantahay iyo sida looga fogaado jagooyinka ama fursadaha aan ka faa iideysan, sida ugu dhaqsaha badan waxaad uheli doontaa farxad. Farxaddu waxay la timaaddaa guul.
Tags: guuldareysigavideo guuldaradaFiidiyowyada Suuqgeyntaguul
Saadaasha 2009: Raadinta iyo Moobilku waa mustaqbalka
Teknoolojiyaddu ma awood u leedahay ama naafaynaysaa Suuqgeyntaada?
Nov 9, 2008 saacadu markay tahay 4:32 PM
Waad ilaawday inaad sheegto waxaad ku fiican tahay dhiirigelinta dadka kale. Tan, indhahayga, waa hanti aad u faro badan, maxaa yeelay cidina kuuguma qaadi karto wax dhaca ah, ma jiro qof shar leh oo dhalaali kara ama u soo bixi kara sida xumbo…
Farriin weyn! Aad baad ugu mahadsantahay wadaagistaada.
Nov 9, 2008 saacadu markay tahay 4:36 PM
Mahadsanid Otir, waxaad tahay qof naxariis badan oo layaableh.
Nov 9, 2008 saacadu markay tahay 5:12 PM
Waxaan xasuustaa si muuqata sidii qof dhalinyaro ah oo la ii sheegay inaan sameyn karo wax kasta oo nolosha ah oo aan maskaxdayda geliyo. Oo intii qof kasta oo hareerahaygu ahaa mid togan oo dhiirrigelin leh; cidina ma awoodin inay gacan ka geysato hanuunka iyo inay i siiso tilmaam ku saabsan sidaan xooggeyga ugu beddelo xirfado suuq leh iyo sida looga fogaado boosaska daciifnimada.
Dhalinyar ahaan; Waxaan ahaa qof isdaba-joog ah illaa maantana waxaan ka helayaa isku xirnaan iyo sameynta xiriiro istiraatiiji ah dartii shaqadeyda oo ah caqabad.
Dib u milicsaday noloshayda; Uma maleynayo inaan la kulmay guuldarrooyin badan oo soo jiidasho leh maxaa yeelay waligey ma aanan helin fursado waaweyn oo ka dhalan kara guulo waaweyn.
Doug, waad ku mahadsan tahay inaad isiisay wax badan oo aan ka fekero.
Nov 10, 2008 saacadu markay tahay 8:44 PM
Scott, waad soo dhaweyneysaa! Waxaad tahay qof karti layaableh - yaanay kuu oggolaan inay wax kaa joojiyaan.
Nov 10, 2008 saacadu markay tahay 8:09 PM
Tan iyo markii ugu horreysay ee aan kula kulmay, waxaad iigu adeegtay sidii dhiirrigelin ii ahayd marwalba iyo marka horeba aniga oo aan si aan macquul ahayn ahay. Waan hubaa inay jiraan kuwo badan oo aniga igu xigi kara taas.
Iyo, fiid hore, waad ku mahadsan tahay adeegga aad u qabtay dalkeenna!
Nov 10, 2008 saacadu markay tahay 8:45 PM
Aad baad u mahadsantahay Julie! Adeeggaygu wuxuu ahaa gabal moofo ah marka loo eego Vets-kayga maalmahan.
Nov 11, 2008 saacadu markay tahay 8:54 PM
Waa wax xiiso leh oo aad ku ogaatay "tijaabo dab ah" in ka faa'iideysiga qofka xooggiisa ay ugu yaraan tahay mid ka mid ah furayaasha farxadda.
Saynisyahannadu waxay gaareen go'aan la mid ah. Waxaad ka heli kartaa taxane fiidiyowyo iyo maqaalo gundhig u ah fikirkaan ah "farxadda" halkan.